Ukuphupha ukunciphisa umzimba Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Iphupha lokuphulukana Peso
Ngubani ongaziyo? Ingxaki yokulinganisa iikhilogremu ezimbalwa kunye nelizwi elingaphakathi elihamba nomnwe wesalathiso ophakanyisiweyo kwaye lisilumkisa ukuba sitye kancinci kwaye, ngaphezulu kwako konke, sibe sempilweni kwikamva.
Zininzi iindlela zokutya ezisithembisa isibhakabhaka esiluhlaza kunye neekhilos ezimbalwa kwisikali. Ukwehlisa umzimba ngelixa ulele - Kwabaninzi, eli liphupha. Kuluntu lwanamhlanje olutyebileyo, inani labantu abatyebe ngokugqithiseleyo liqhubeka lisanda. Ngaphezulu kwesinye kubantu ababini eJamani kuya kufuneka banciphise ubunzima, nangona apha amadoda echaphazeleka kakhulu kunabafazi. Nangona kunjalo, isampulu yamadoda kunqabile ukuba ive isikhalazo seengxaki zobunzima. Ngokukodwa ngabasetyhini abonelisekanga yimizimba yabo kwaye bafuna ukunciphisa umzimba.
Indawo yanamhlanje yobuhle inegalelo elikhulu kwinto yokuba siziva singonwabanga kulusu lwethu. Amajelo osasazo asibonisa isipili yonke imihla, engqina kwintengiso nakwimiboniso bhanyabhanya ukuba kuphela abo banokuphendula "ubungakanani 0" kumbuzo wobungakanani bempahla abanomtsalane kwaye bonwabile. Oku kuhlala kuneziphumo ezibulalayo, ngakumbi kulutsha nakubantu abadala abancinci. Nciphisa umzimba ngazo zonke iindleko, nangona bekungekho nto kwaphela okanye akukho nto yokunciphisa umzimba. Amantombazana, kodwa namakhwenkwe, athi abe yi-anorexic okanye abe ne-bulimia kunye nokugabha rhoqo aziphathe kakuhle kwaye azive ngathi "utyebile" nangona sele betyebile.
Ukuba umntu ujongana nesihloko esithi "ukunciphisa umzimba" nokuba usephupheni, kusenokubakho ingxaki enkulu emva kwayo. Funda ngakumbi ngalo mbandela ungezantsi:
1 Uphawu lwephupha «ukunciphisa umzimba» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukunciphisa umzimba» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukunciphisa umzimba» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukunciphisa umzimba» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, uphawu lwephupha "ukunciphisa" kunxulunyaniswa ngakumbi nemiba emibi yokutolikwa. Ukuba uzifumana ephupheni njengomntu ophulukana nobunzima, mhlawumbi ukunciphisa nokurhona, oku kuyazisa kwelinye icala IKummer y ilahleko Ukuqhubela phambili, kwelinye icala, oku kunokunika uphawu lobuthathaka bezempilo obuzayo. Umxholo wonke wephupha kufuneka ubandakanywe ekutolikeni, kuba amava omntu ngamnye ephupheni nawo angaba sisigqibo sokuchazwa ngokuchanekileyo kwephupha.
Ukwehla kobunzima nako kunokwenzeka ephupheni ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo. Ukuba ulahla ubunzima obuninzi nangaphezulu ngenxa yoko, ungabalekela kwihlabathi elivukayo. Imibuzokuba umntu esoyika ukuba akukho ndlela yakuphuma kuzo.
Ngokuhla kwesisindo esingapheliyo, iphupha livakalisa umnqweno wokunyibilika ube ngumoya omncinci kwaye uyeke ukuba noxanduva lokusombulula iingxaki. Ke ukuba ezi ngcinga sele zilungisiwe el mundo ukuphupha, ukuphupha kulungile ukujongana neengxaki kwaye ungazibaleki, nangona ngamanye amaxesha kubonakala ngathi sesona sisombululo silula.
Uphawu lwephupha "ukunciphisa umzimba" lunokuthetha ngaphezulu kokulahleka kobunzima bomzimba. InyangaUmzekelo, inokubonakala njengenyanga enciphileyo kumaphupha ethu. Ngokophando lwamaphupha, oku kufanekisela ukuba umntu uya kuyenza kwixesha elizayo nge Ukungaphumeleli kufuneka ubale. Ezi ziyanyamezeleka, kodwa kuya kufuneka ucwangcise kwangaphambili ukuze umgangatho wokuphila ugcinwe.
Ukuba ucwangcisa inkampani okanye iprojekthi, kuya kufuneka uvumele ixesha elithile ukuba lidlule malunga noku. Okomzuzwana le inokuba yenye ixesha elingalungangakuba amathuba okuphumelela mancinci kakhulu.
Ukwehla kobushushu, umzekelo ngesitovu esinethayile, ephupheni kuhlala kubonisa ukuphola kweemvakalelo. Umphuphi kufuneka ajonge imeko yakhe yangoku yeemvakalelo kwihlabathi elivukayo. Ukuba umntu ukhulula ikepusi ephupheni, kuya kufuneka aqonde ukuba omnye uya kuba ngasemva kwabanye.
Uphawu lwephupha «ukunciphisa umzimba» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, uphawu lwephupha "ukuncipha" lunokuchazwa ngeendlela ezahlukeneyo. Ukuba umntu otyebe ngokugqithiseleyo uphupha ngokunciphisa umzimba, ngumnqweno wamaphupha kuphela wokugqibela ukunciphisa umzimba kwaye owakho uchazwe apha. Efanelekileyo ngobuhle Ziyangqinelana.
Ukuba, kwelinye icala, ukwehla kobunzima kuyazibonakalisa kwabanye abantu ephupheni, kufanele ukuba kucaciswe kumntu ochaphazelekayo ukuba abanye abantu bahlala bebi kakhulu kunabo. Apha amava ephupha angaluncedo kuye, olwakho. ukuqonda Zilolongele ubuninzi kunye nobutyebi ebomini bakho kwaye ungahlali ukhalaza kwinqanaba eliphezulu.
Ukuba uziva wonwabile ephupheni ngelixa unciphisa umzimba, nangona sele ujongeka ungaphezulu kunehagu, ngokuqinisekileyo kufuneka ukwenze oku njengo isilumkiso Qonda indlela yokuzikhathalela ebomini bakho kunye nendlela yokuqinisekisa ukutya okwaneleyo. Kungenxa yokuba oku ngokukhawuleza kudala umjikelo okhohlakeleyo ekungasekho lula ukuba uqhawulwe.
I-Anorexia okanye i-bulimia ihlala iyinkqubo ethe chu. Iqela elinomdla likholelwa ekubeni kufuneka lizalisekise ubuhle bobuhle obujolise esidlangalaleni kwaye le kuphela kwendlela yokufumana ukwamkelwa nothando. Ukuba uyazibona ngaphakathi kuwe iingcinga ezinyanzelekileyo, kuya kufuneka ufune uncedo lonyango ngokukhawuleza.
Uphawu lwephupha «ukunciphisa umzimba» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya yokujonga ukutolika kwephupha, uphawu lwephupha lufanekisela "ukunciphisa" ababuthathaka. izinto zokomoya yokuphupha. Ukomeleza kunye nesiseko ziyafuneka apha ukomeleza nokukhulisa amandla okomoya.